आज साेमबार फेरि बढ्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ « गोर्खाली खबर डटकम
भदौ २८ गते । आज साेमबार फेरि बढ्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ । आज सोमबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ । आज छापावाला सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँले बढेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
आज छापावाला सुन ताेलामा ३ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुन पनि तोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेर प्रतितोला ९० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
आज चाँदी पनि तोलामा ५ रुपैयाँले बढेको छ । आज चाँदी ताेलामा ५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
अम्बाको पात सेवन गर्नुका यी चमत्कारी फाइदा जान्नुभयाे भने खाेजि-खाेजि प्रयाेग गर्न थाल्नुहुनेछ !
अम्बाको पात सेवन गर्नुका यी चमत्कारी फाइदा जान्नुभयाे भने खाेजि-खाेजि प्रयाेग गर्न थाल्नुहुनेछ ! हाम्रै घर वरिपरि पाईने कतिपय यस्तो चिजहरु हुन्छन् जसको प्रयोग र फाइदाको बारेमा हामी अन्जान, बेखबर रहेका हुन्छौँ र सानो समस्यामा पनि केमिकल युक्त बजारमा पाईने औषधी सेवन गर्ने गर्छौँ ।
कतिपय घरेलु जडिबुटीले पनि धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सक्छ । जडिबुटीको रुपमा लिईने अम्बाको पातको बारेमा जान्नुपर्ने यी कुराहरु । अम्बा तपाइ हामी सबैलाई थाहा छ । हामी अम्बा निकै स्वाद लिएर खाने गर्छौँ तर त्यहि अम्बाको पात सेवन गर्नु पनि निकै फाईदा हुन्छ भन्ने हामी मध्ये कतिलाई थाहा नभएको हुनसक्छ ।
अम्बाको पात एन्टीअक्सिडेन्ट, एन्टीब्याक्टेरियल जस्ता गुुणले भरिएको हुन्छ । छाला, कपाल र स्वास्थ्यको लागि अम्बाको पातको प्रयोग निकै लाभदायक मानिन्छ । अम्बाको पातकाे सेवन बाट पाइने यी फाइदाहरु पढ्नुहाेस्:-
१) पाचन तन्त्रको तन्दुरुस्त राख्नको लागि अम्बाको पात लाभदायक मानिन्छ । २) मधुमेहका रोगीले अम्बाको पात सेवन गर्नु निकै लाभदायक हुन्छ । ३) अम्बाको पातको रस पिउने गर्नाले उच्च रक्तचाप कम हुन्छ ।
४) अम्बाको पातको रस निकालेर खानाले शरीरको तौल कम गर्न सकिन्छ । ५) पखाला लाग्दा अम्बाको पात खायौँ भने पखाला रोकिन्छ ।